Ra’iisul Wasaare Rooble oo qaaday tallaabadii ugu horraysay ee lagu hirgelinayo doorashada.
Puntlandtimes (Muqdisho)-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa tababar u furay Guddiyada Doorashooyinka Dalka heer federal iyo heer dawlad goboleed tababarkan ayaa socon doona mudo afar cisho ah.
Mudane Maxamed Xuseen Rooble, Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta ah ee Soomaaliya oo furay tababarkan ayaa gudiyadda kula dardaarmay in ay si daahfuran oo caddaalad ah u maamulaan hawlaha doorashooyinka ee loo igmaday.
K issa says:
Waa maashalah waa wadanimo
Waa war cadaalad la muuqato
Waxa Soomaalidan lagu “tababbarayo” waa dhaqan qalaad oo ay shisheeyuhu maryooleyda “aqoon” ugadhigayaan. Waxaa ugudaran in shisheeyahaasu yihiin isla kuwii Soomaalida badankeeda waahore gumeystay oo midnimadeedii iyo wadajirkeedii xuduudo xaaraan ah kaga kaladhambalay.
Waxaana kasiidaran bahdilaadda “tababbarkan” kudhex duugan oo ah in raggaa iyo dumarkaa cimrigaas jooga ay gaalo aan diin lahayn “barayso” sidii ay “caddaalad” iyo “daafurnaan” dalkooda wax uguqaban lahaayeen, iyaga oo muslimiin ah oo Kitaabka Alle (SW) iyo Sunnaha Rasuulka (SCW) haysta.
Soomaalida waxan oo kale “horumar” iyo wax fiican oo aan laga dhiidhiyin u aragta anigu ma aqaan wax lagutilmaamo. Adiga oo diinta Islaamka dhaxal uyeeshay gaalo aan wax diin ahba lahayn sidii aad udhaqmi lahayd oo isudhaqi lahayd hakuu meeriso oo weliba laaluushna hakuugudarto masiibo kaweyn majirto xaqiiqatan.